यसरी सुरु भएको थियो महरालाई फसाउने खेल | Indrenionline.com
यसरी सुरु भएको थियो महरालाई फसाउने खेल
[निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । संसद सचिवालयमा कार्यरत रोशनी शाहीले आफूमाथि महराले यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि सभामुखबाट राजीनामा दिएका महरालाई दशैं समेत मान्न नदिएर सभामुख निवासबाटै पक्राउ गरियो । आरोप लगाउने रोशनी शाहीले नै बारम्बार आफूमाथि कुनै दुव्र्यवहार नभएको बताइरहँदा पनि त्यसको कुनै सुनुवाई भएको छैन । हिरासतमा रहेका पूर्वसभामुख महराको मुद्दालाई आजै प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । यहीबीचमा युरोपमा व्यवसाय गर्ने मधु कार्कीले यो प्रकरणमा सनसनीपूर्ण खुलासा गरेकी छन् । आफ्नो फेसबुक वालमा लामो स्टाटस लेख्दै सार्वजनिक गरेको तथ्यलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ– सम्पादक ।]
के सत्य हो ? त्यो भगवान शिव हुनुहुन्छ या सहभागी । महरा मेरो कोही हैनन् । न मेरो बाउ, काका, न मेरो आफन्ती न त मैले राजनीतिक चश्मा लगाएकी छु आजसम्म । मेरो लागि सबै राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञ समान हुन् । वास्तवमा नेपालको राजनीति र राजनीतिज्ञसङ्ग अत्यन्तै वितृष्णा छ मलाई । परदेशी हुँ । देशको माया बिछट्टै लाग्छ । केही सत्य र यथार्थसङ्ग जानकार हुँदाहुँदै मौन बस्नु अमानवीय ठानी फेरि पनि भन्न चाहन्छु– आमनेपाली र नेपाल सरकारलाई । क. महरालाई ग्राण्ड डिजाइनसहित फसाइएको हो । dainikonline.com बाट
९ कार्तिक २०७६, शनिबार १६:१९
Previous: सुर्खेतका पानी उद्योग मापदण्ड विपरीत
Next: प्रधानमन्त्री ओली एक्कसी बिरामी भएपछि यसरी गरिदैछ उपचार